पूर्ण रुपमा कमेडी कथामा निर्माण भएको ‘अमेरिका बोइज’को ब्यापार कस्तो भयो ? – tvNEPALI
पूर्ण रुपमा कमेडी कथामा निर्माण भएको ‘अमेरिका बोइज’को ब्यापार कस्तो भयो ?
Posted on २० जेष्ठ २०७५, आईतवार १२:०८ June 3, 2018
भव्य कमेडीले भरपूर्ण फिल्म ‘अमेरिका बोइज’ शुक्रबार देखि देश भरिकै हलहरुमा प्रदर्शन भएको छ । पूर्ण रुपमा कमेडी कथामा निर्माण भएको यो चलचित्रले राम्रो व्यापार गरेको दाबी समेत गरिएको छ ।
चलचित्रमा सुनिल थापा, हरिहर शर्मा, सन्दिप क्षेत्री, कामेश्वर चौरासिया, श्रृष्टी कार्कीको पनि मुख्य भूमिका छ । प्रकाश भुजेल र इन्द्रप्रसाद खरेलको संयुक्त लगानीमा यो चलचित्र बनेको हो । चलचित्रको वर्ड अफ माउथ सुखद रहेकाले दर्शक बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।
शुक्रबारबाट नै रिलिज भएका अन्य २ नेपाली चलचित्रको व्यापार भन्दा ‘अमेरिका बोइज’को व्यापार धेरै माथि रहेको हल संचालकहरुले बताएका छन् ।
Posted in कला मनोरञ्जन Tagged अमेरिका बोइज, कलाकार, चलचित्र
साहरुखको नयाँ फिल्म ‘स्यालुट’मा यी नायिका भईन् फाइनल
३१ बर्ष पुगेकी नायिका सोनाक्षी सिन्हाको बारेमा रोचक कुराहरु